MY HERO ACADEMIA IXESHA LESI-5 SEACTOR VOICE UDLIWANONDLEBE LWEVIDIYO! - ANIME
Umzingeli We Holly
Boyika Abafileyo Abahambayo
Udliwanondlebe wam weXesha leMfundo leHero lesi-5 Udliwanondlebe noJustin Briner, uClifford Chapin, kunye noAnairis Quiñones!
Molo apho, abantu abathanda i-anime kunye nabahlali baseU.A. Ephakamileyo (ucinga ukuba unesibindi sokuhlala ekhampasini), namhlanje uFunimation ubhengeze ukukhutshwa kwe-dub ixesha lesi-5 IHero lam leMfundo ! Umsebenzi wokuhambisa uguqulelo lwenqaku laseJapan ukusukela kwinkulumbuso yokuqala ngoMatshi 27 kwaye uza kuqala ukusasaza idubi ngalo Mgqibelo, ka-Epreli 10.
Uninzi lwe-dub cast lwangaphambili luya kuphinda ludlale indima yabo njengamaqhawe wethu awathandayo, kubandakanya uJustin Briner (umlinganiswa ophambili kunye nabo bonke-abajikeleze inkwenkwe elungileyo u-Izuku Midoriya / Deku), uClifford Chapin (Katsuki Bakugo / King Explosion Murder, okanye INkosi yokuqhushumba -Igama lehero lisalindelwe), kunye neAnairis Quiñones! (Ndiza kukhaba iQhawe lakho loMvundla we-Butt, uMirko, owaqala ukubuyela kwisizini ye-4). Ukuze ubhiyozele ukubuya kwe-dub (kwaye ube nesinye isizathu sokukhupha i-fangirl ngaphezulu IHero lam leMfundo), Ndifumene ithuba lokuncokola nabo bobathathu aba badlali bamazwi bamangalisayo!
Udliwanondlebe lwethu lucinga ngento eyenza ukuba uthotho lube lukhulu kangaka, indlela abalinganiswa abakhuthaza ngayo umdlali ngamnye, kunye noko abantu bonke bajonge phambili kwixesha elitsha.
Iintloko ezikhawulezayo phezulu: kukho abaphangi be-anime kulo lonke udliwanondlebe, ke ukuba awukabukeli uthotho okwangoku, yima kule vidiyo. Ukuba u unayo ubukele (okanye awukhathali ngabaphangi) zive ukhululekile ukundibukela ndenza olona luvo lwam lobungcali kwinto ethile okanye mandithi ngubani othetha nabanye babadlali belizwi abathandayo!
Ixesha 5 kuthotho ithatha i-Endeavor kunye neeHawks ezijongana nemva komlo ophakamileyo we-High-End Nomu owaphelisa ixesha le-4. Kwangelo xesha, ukuqala kukaDeku ukufunda ngembali ye-quirk yakhe, Inye kubo Bonke , kwaye uzama ukuqonda imifanekiso awayeyibona emaphupheni akhe. Akukho xesha lide lokuchaza ukuba kuqhubeka ntoni njengoko iklasi yakhe sele iza kuthatha inxaxheba kuqeqesho lokuziqhelanisa neClass 1-B, elinye iqela lamagorha ekuqeqesheni abantwana abaye baqeqesha nabo ngaphambili. Ngeli xesha kujongeka ngathi kuzokubakho uqeqesho oluthile lokulwa, ke ndiyathemba ukubona wonke umntu efumana ithuba lokuqaqamba.
Ungabukela IHero lam leMfundo ngaphaya ko Funimation ngeziqendu ezibonisa ngentsasa yangoMgqibelo.
Imvelaphi yobuhedeni yekrisimesi yobusika
ubomi buyinto engaqhelekanga yemfazwe
Umxholo obuzayo kunye nemarten
Paw patrol is marshall intombazana
usebenze njani nge-Nintendo zapper
Heyi uyamangala umntu enze umnqweno